Nchọgharị Nchọgharị | January 2020
Isi Nchọgharị Nchọgharị
OK ịchekwa ọdịyo - nchịkọta Google Chrome maka nbudata egwu si Odnoklassniki
Mgbe ụfọdụ, ịnwe ike ịge egwu na netwọk mmekọrịta gị kachasị mma ezughị ezu. Enwere mkpa ibudata egwu egwu site na Odnoklassniki na kọmputa gị. Iji mee nke a, enwere mgbatị dị na ihe nchọgharị Google Chrome a ma ama maka nbudata egwu site na Odnoklassniki akpọ OK na-azọpụta ụda.
Savefrom.net: ntinye ihe nchọgharị ka ibudata ihe site na VK
Savefrom.net bụ ọrụ na-ewu ewu n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ibudata vidiyo site na saịtị saịtị vidio a ma ama. Ị maara na na saịtị ọrụ ị nwere ike ibudata nyocha nchọgharị pụrụ iche nke na-enye gị ohere ibudata ihe ọdịyo sitere na netwọk mmekọrịta ọha na eze Vkontakte? Iji nwee ike ibudata egwu si VK, dị nnọọ wụnye tinyefụ na Savefrom.
Ihe ndozi nke bara uru maka Microsoft Edge
Na Microsoft Edge, dịka na nchọpụta ndị ọzọ a ma ama, enwere ike ịgbakwunye ndọtị. Ụfọdụ n'ime ha na-eme ka ojiji nke ihe nchọgharị weebụ dị mfe karị ma na-arụ ọrụ site na ndị ọrụ mbụ. Ihe nkwụsị kacha mma maka Microsoft Edge Taa, Ụlọ Ahịa Windows nwere nkwụnye 30 dị maka Edge.
VkButton - ntinye nyocha maka ọrụ na netwọk mmekọrịta
Ọrụ VKontakte bụ netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu na Russia, na otu n'ime ndị kasị eleta n'ụwa. Ọtụtụ nde ndị ọrụ na-ekwurịta okwu, kekọrịta foto, vidiyo na egwu na ibe weebụ. N'ezie, onye ọrụ ọ bụla nwere ọchịchọ nke aka ya iji melite interface na ike nke netwọk mmekọrịta a na-ewu ewu.
Ihe mgbakwunye VKfox maka VK
VKfox ngwa mgbakwunye maka VKontakte bụ ndọtị ọzọ nke atọ maka ihe ọ bụla nke oge a na-enye ọtụtụ ngwaọrụ nke na-eme ka ikike nke saịtị ahụ dịkwuo elu. Ọzọ n'isiokwu anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ọrụ ndị a na-eweta site na mgbakwụnye a. Mgbasawanye na ajụjụ a bụ iji mee ka ọrụ ọrụ netwọk rụọ ọrụ n'enweghị ịga na saịtị ahụ n'onwe ya.
Mgbasa ozi bụ engine nke azụmahịa, ma ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-emekarị ya nke ukwuu na ọ na-esi ike ịga leta ihe ọ bụla weebụ. Otú ọ dị, iji ngwá ọrụ dị ka onye mgbasa ozi, ị nwere ike ichefu mgbasa ozi na ngosipụta dị iche iche. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe nchọgharị nchọgharị kachasị - Adblock Plus.
Jiri ihe VKontakte mee ihe na mgbakwunye nke VKLife
VKontakte ji obi ike gbalịsie ike ịgbakwunye ụdị ọrụ niile maka mma nke ndị ọrụ ya. Otú ọ dị, netwọk mmekọrịta a enweghị ụfọdụ ihe ndị dị mkpa mgbe ụfọdụ iji dị mkpa iji mee ihe kwa ụbọchị. N'ebe a, ị nwere ike ime ka onye ọkpụkpọ ahụ nwee ike ịnweta ohere dị mfe, anya ngwa ngwa na mkparịta ụka na ndị enyi ndị dị ugbu a.
Oktools - ndọtị nbudata maka nbudata egwu si Odnoklassniki
Ọ bụrụ na ị na-eji netwọk Odnoklassniki na-ege ntị na egwu n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike iche banyere ohere ịbudata egwu na kọmputa gị. Ọrụ ahụ n'onwe ya anaghị ekwe ka ị budata egwu site na saịtị ahụ, ma ị nwere ike idozi ntụpọ a n'ihi mmemme dị iche iche. Oktuls bụ ntinye mgbakwunye (ihe mgbakwunye) maka ihe nchọgharị na-ewu ewu nke na-enye gị ohere ibudata ntaneti site na saịtị Odnoklassniki na otu igodo nke òké.
AdBlock vs. AdBlock Plus: Nke dị Mma
Mgbasa ozi na obodo anyị mepere emepe enwetawo ụdị dị iche iche karịa afọ iri abụọ gara aga. Ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụla na Intaneti, ọ bụghị ihe ijuanya, n'ihi na nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ego. Otú ọ dị, enwere ntinye ihe nchọgharị pụrụ iche iji gbochie mgbasa ozi, ọtụtụ ndị ọrụ toro eto makwaara ha.
EQ Extensions Nchọgharị
Ugboro ugboro, ndị ọrụ na Ịntanet na-ekiri vidio ma gee egwu, ma mgbe ụfọdụ, àgwà ha na-ewepụta ihe dị ukwuu. Iji dozie nke a, ị nwere ike ịhazi ụda kaadị ọkpụkpọ, ma na nke a, a ga-etinye ọnọdụ ahụ na sistemụ arụmọrụ dum. Iji chịkwaa ogo olu naanị n'ime ihe nchọgharị ahụ, ị ​​nwere ike iji ndọtị, ọ dị mma, enwere ihe ị ga-ahọrọ.
VkOpt: atụmatụ ọhụrụ maka netwọk mmekọrịta mmadụ abụọ Vkontakte
VKOpt bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ na-ewu ewu karịsịa maka netwọk mmekọrịta Vkontakte, nke ga-eju onye ọrụ ọ bụla anya na ọrụ ya. Na mbu, e mepụtara usoro ahụ iji budata ọdịyo na vidiyo site na Vkontakte, mana, dịka ị nwere ike ịghọta ugbu a, ọganihu ndị a na-agbasa agaghị akwụsị n'ebe ahụ.
DownloadHelper: nchịkọta ihe nchọgharị loader
Download Nnyeaka bụ ntinye dị irè maka nbudata ihe na vidiyo site na Ịntanetị. Site na mgbatị dị mfe, ị nwere ike ibudata faịlụ ọ bụla mgbasa ozi ị nwere ike igwu egwu na ntanetị. DownloadHelper na-akwado abụọ ewu ewu - Google Chrome na Mozilla Firefox.
Download video site na Video Downloader Pro
E nwere ọtụtụ faịlụ na vidiyo na-akpali mmasị na Ịntanetị, nke a na-ahụ ma na-egere na ịntanetị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata egwu ma ọ bụ vidiyo na kọmputa gị, Video Downloader Pro ga-enyere gị aka ịnagide ọrụ a. Video Downloader Pro bụ ntinye ihe nchọgharị bara uru na-enye gị ohere ibudata faịlụ na faịlụ vidiyo site na ọrụ ndị a ma ama dịka VKontakte, Odnoklassniki, Vimeo na ọtụtụ ndị ọzọ.
MusicSig: ntinye ihe nchọgharị maka saịtị Vkontakte
Sig egwu bụ ihe ntinye ihe eji eme ihe iji dozie ihe Vontakte. Otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa nke ọrụ ahụ bụ ikike ibudata egwu site na netwọk mmekọrịta mmadụ na-ewu ewu, ma tinye-ons adịghị akwụsị n'ebe ahụ. A na-akwado MusicSig site na ihe nchọgharị weebụ dịka Mozilla Firefox, Opera, na Google Chrome.
https://termotools.com ig.termotools.com © Nchọgharị Nchọgharị 2020